Wax la sameeyo, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
»Muddo intee la eg ayaad rabtaa inaad kula hadasho wax sidan oo kale ah oo ay tahay in ereyada afkaagu ay noqdaan uun dabayl xoog badan» (Job 8: 2)? Waxay ahayd maalin ka mid ah maalmahaas dhifka ah ee aanan wax qorsheysan. Marka waxaan moodayay inaan hagaajinayo sanduuqa emaylkayga. Markaa tirada ayaa ka yaraatay 356, ugu dhakhsaha badan 123 emayl ah, laakiin ka dib taleefanka ayaa kor u kacay; xubin ka tirsan baarlamaanka ayaa weydiiyay su'aal adag. Wadahadalka ayaa saacad ka dib socday.
Marka xigta waxaan doonayey inaan dharka dhaqdo. Isla markii ay dharka ku jiraan mashiinka dharka dhaqa, albaabka albaabka ayaa qeyla dhaamiyay, waa deriska xiga albaabkiisa. Nus saac ka dib waxaan awoodey inaan ku wareejiyo mashiinka dharka dhaqa.
Waxaan u maleeyay inay dhici karto inaan daawan karo ciyaarta TV-ga ee xiisaha leh. Naftaydu waxaan ku raaxeysanayey kursi leh koob kulul oo shaah ah marka taleefanka mar labaad la soo garaaco. Malaakiyadan wuxuu xubin ka ahaa kulan wax laga weydiiyay dhamaadka usbuuca. Wuxuu joojiyay wicitaankii waqtigiisii ​​oo keliya si aan u daawado wareegga ugu dambeeya ee finalka TV-ga oo aan ka cabbo shaaha qabow.
Waa inaan sameeyaa shaqada tifaftirka mid ka mid ah qoraalladeenna dibadda. Maanta waxay ahaan laheyd waqtiga ku habboon oo la dhammaystiro qorista qodobbada. E-maylku wuxuu ku dhex dhacay gudaha sanduuqkayga waxaanan dareemay in aan ku qasbanahay in aan qaato waqti aan kaga jawaabo nooca kiiska isla markiiba.
Waqti qadada. Sidii caadiga ahayd, waxaan qaatay rooti ka dibna dib ayaan ugu laabanayaa maqaalka. Kadib wicitaan ayaa mar kale soo noqnoqonaya, xubin qoyska ka tirsan ayaa leh dhibaatooyin. Waxaan joojiyaa shaqada si aan u arko sida aan u caawin karo. Waxaan ku soo noqdaa saqda dhexe oo "sariirta aada"
Si sax ah ii faham, Ma cabanayo. Laakiin waxaan garwaaqsaday in Ilaah weligiis maalmahan oo kale uusan jirin oo ay maalin ii ahayd maalin aan caadi ahayn. Ilaahay kama yaabineyno dhibaatooyinkeena ama ducadayada. Wuxuu heystaa waqtiga oo dhan, weligiis. Wuxuu u imaan karaa inuu na kulmo ilaa iyo inta aan rabno inaan barinno. Khasab kuma aha inuu ka baxo waqtiga jadwalka si uu u daryeelo shaqooyinka maalinlaha ah ama wax cunista. Isagu wuu dhegeysan karaa oo dhegeysan karaa wiilkiisa oo ah wadaadka sare ee u keenaya waxyaalahayaga. Aad ayaan muhiim ugu nahay isaga.
Hadana mararka qaar annagu waqti uma lihin Ilaah, gaar ahaan maalinta mashquulka ah. Waqtiyada kale waxaan badanaaba ka fikirnaa inay tahay inaan bixinno howlaha degdegga ah meel sharaf ku leh nolosheena. Markaas Ilaah kaliya wuu eegi karaa haddii aan haysano daqiiqad ama wax ka yar inaan sameeyo. Ama marka aan dhibaato helno. Oh, markaa waxaan haysanaa waqti badan oo Ilaah markii aan dhibaato ku jirno!
Mararka qaar waxaan u maleynayaa in Masiixiyiintu ay u muujiyaan ixtiraam ka badan kan Ilaah marka loo eego kuwa caabuda oo aan sheegan inay iyagu sharfayaan oo ay isaga raacayaan!
Aabe naxariis leh, waad noo roontahay dhamaan duruufaha iyo waqtiyada oo dhan. Fadlan naga caawi inaan noqonno kuwa mahadnaq iyo aqbal leh waqti walba. Tan waxaan ku baryeynaa magaca Ciise, Aamiin
waxaa qoray John Stettaford